यो सरकारले सकेन। अब म गर्छु म’हामारी नियन्त्रण: प्रचण्ड:: Mero Desh
यो सरकारले सकेन। अब म गर्छु म’हामारी नियन्त्रण: प्रचण्ड
Published on: ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०५:२९
काठमाण्डौं।यो सर”कारले अह सकेन अब म गर्छु यो महामारी नियन्त्रण: प्रचण्ड। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबआफूले महामारी नियन्त्रण को अ”गुवाई गर्ने बताएका छन् । उनले महामारी नियन्त्रण गर्न गठित सरकारी संयन्त्र खा”रेजीको समेत माग गरेका छन् ।
यस सँगै नेकपा” माओवादी केन्द्रले अध्य’क्ष पुष्पकमल” दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा केन्द्रीय कोभिड निय”न्त्रण इ’काई बनाउने निर्णय गरेको छ ।स्थायी कमिटि बैठकले यस्तो निर्ण’य गरेको हो । एक स्थायी कमिटि सदस्यका अनुसार अब सरकारको भरोसा नरहेकाले माओवादीले नेतृत्व लिन चाहेको हो ।
यस्तो क”मिटिलाई स्थानीय स्तर सम्म बिस्तार गरिनेछ अब
एक जना स्थायी कमिटि सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले गोर्खामा ब्यस्त छन् । प्रचण्डको क”माण्डमा अब केन्द्रीय कोभिड नियन्त्रण इ”काई बनाउने, सदस्य संख्या भने श्रेष्ठ लगायतका नेतासँग सरसल्लाह गरेर ।टुंग्या”उने र संख्या” सकेसम्म सानो बनाउने निर्णय भएको ।
ती सदस्यले जानकारी दिए ।पार्टी श्रोतका अनुसार यस” अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कोभिड इकाई रहने छन् । प्रदेशमा भने पार्टीका प्रदेश इन्चार्जले त्यसको नेतृत्व गर्ने छन् ।बैठकले त्यस्तो युनिट पाँच दिन भित्र बनाइ सक्न ” पार्टी कमिटी मा सर्कुलर पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सरकार कोरोना नियन्त्रण मा असफल भएको र कमिसन तन्त्रमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसी खारेजको माग समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।# साभार दैनिकी समचार डटकम। यो खबर कस्तो लाग्यो पढेर अब आफ्नो अमुल्य समय र विचारहरु लेख्न भने नछुटाउनु होला धन्यवाद।
य‍ो पनि काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिलाई म’हा’अभियोग लगाउर बिदा गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भए लगत्तै थापा ले यस्तो बताएका हुन् ।राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ले गलत काम गरेकाले सुझबुझ पुर्याएर राष्ट्र”पतिले “सरकार गठनका लागि दिएको समय अगावै उनीहरुलाई बिदा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । थापाले ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्र पतिले गलत बाटो।
अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । विश्वासको मत लिन मन नलागे प्रमले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रकृया सुरु गर्ने हो ! “नेता’गण,के राष्ट्रपति र प्रमले थाहा नपाए र यो गरेको हो?’, प्रश्न गर्दै गगनले ट्वीटरमा लेखे का छन् ,जाने र गरेको हो। गनगन गरेर नबसौं। सुझ बुझ पुर्याउँ
र यिनले दिएको समय अगा वै नयाँ सरकार बनाए र ओलीला ई बिदा गरौं, म’हाअभियोग लगाएर राप लाई बिदा गरौं यो पनि! पूर्वमन्त्री एवम् एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले रामबहादुर थापा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन मा पराजित भएपछि दूध खुवाएर पालेका साँपले डसे को प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विपक्षीसँग कुनै गुनासो नभएको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका मान्छेले आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगरेको भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। बाँस्कोटाले समयको अन्त्य नभएर यो सुरुवात मात्र भएकोसमेत उल्लेख गरेका छन्। एमालेबाट बागमती प्रदेशको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापा उम्मेदवार बनेका थिए।
उनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार डा . खिमलाल देवकोटाले परा जित गरेपछि बाँस्कोटाको यो प्र तिक्रिया आएको हो। दुध खुवाएर पालेका साँपले डसेका हुन्’, थापालाई चुनाव जिताउन हेटौंडासम्मै पुगेका बाँस्कोटाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘विक्षीसँग कुनै गुनासो छैन,समयको अन्त्य हैन नयाँ सुरुआत मात्र।श्रोत:अन्नपूर्ण